२३ माघ, २०७६ | Mero UK
Day: २३ माघ, २०७६
मासुको मूल्य बढाउन चल्ला मार्नेलाई कारवाही गर्न टोली खटिँदै
२३ माघ, २०७६ २३ माघ, २०७६ / अनलाइन खबर
२३ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले कुखुराका चल्ला र अण्डा नष्ट गरेर मासुको मूल्य बढाउनेहरुलाई बल्ल कारवाही गर्न तयारी थालेको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ताहित संरक्षण विभागले सिन्डिकेट गरेर कुखुराको मूल्य दोब्बर बनाउन नेतृत्व गर्नेहरुलाई कारवाही गर्ने भएको हो । त्यसपछि अभियानमा सहयोग गर्ने सबैलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने दावी सरकारको छ । उपभोक्ताहित संरक्षण विभागका …
मासुको मूल्य बढाउन चल्ला मार्नेलाई कारवाही गर्न टोली खटिँदै Read More »
‘कानून मिचेर सरकारी जग्गा बेच्नु नीतिगत निर्णय होइन’
कानूनअनुसार मोही कायमसम्बन्धी निर्णयको अधिकार भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई छ । मन्त्रालयको अधिकार भए पनि यो मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै गर्छ भने त्यो कानून सम्मत् हुन सक्दैन । आफूले नपाएको काम गर्ने अधिकार त स्वयं कानून बनाउने संसदलाई पनि छैन । कानूनमा नभएको काम गर्नुपर्‍यो भने संसदले पनि कानून संशोधन गरेर मात्रै गर्दछ । त्यही भएर त …
‘कानून मिचेर सरकारी जग्गा बेच्नु नीतिगत निर्णय होइन’ Read More »
गच्छदारको बचाउ गर्दै कांग्रेसले गर्‍यो संसदमा अवरोध
२२ माघ, काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले ललित निवास जग्गा प्रकरणमा आफ्नो संसदीय दलका उपनेता विजयकुमार गच्छदारमाथि राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा मुद्दा चलाएको भन्दै संसद अवरुद्ध गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार मात्र ललितानिवास प्रकरणमा गच्छदारसहित १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तर कांग्रेसले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा मुद्दा दायर गरिएको …
गच्छदारको बचाउ गर्दै कांग्रेसले गर्‍यो संसदमा अवरोध Read More »
वुहानमा छोराछोरी रोइरहेका छन्, नेपालमा बावुआमा !
२३ माघ, काठमाडौं । बिहीबार दिउँसोको १२ बजे । अरु दिन भन्दा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा भीडभाड थियो । मन्त्रालयको प्रांगणमा नयाँ मानिसहरुको भीड बढ्दै थियो । उदास अनुहार देखिए पनि आवाजमा आक्रोश सुनिन्थ्यो । उनीहरु भन्दै थिए, ‘अब त अत्ति भयो, लाचार हुनुको पनि हद हुन्छ नि ।’ उनीहरु कोरोना भाइरसको चपेटामा परेको चीनको …
वुहानमा छोराछोरी रोइरहेका छन्, नेपालमा बावुआमा ! Read More »
विजय गच्छदारको बचाउमा हतारियो कांग्रेस
२३ माघ, काठमाडौं । ‘नेपाली जनताले पटकपटक अभिमत दिएर आफ्नो नेताका रुपमा स्वीकार गरेको, थारु समुदायको नेतृत्व लिएको, १० वर्ष जेलमा बसेको प्रजतन्त्र स्थापनाका लागि लड्दै आएको एउटा नेतालाई राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा मुद्दा दायर गर्न मिल्छ ? कदापी मिल्दैन’ नेपाली कांग्रेसले बिहीबार संसद अवरोध गर्नुअघि सचेतक पुष्पा भुषालले संसदमा भनिन् । झण्डै १० मिनेट लामो …
विजय गच्छदारको बचाउमा हतारियो कांग्रेस Read More »
कांग्रेसलाई सरकारको जवाफ : अदालतबाट निर्दोष प्रमाणित गरेर आउनुस्
२३ माघ, काठमाडौं । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले ललिता निवास प्रकरणमा राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेको विजयकुमार गच्छदारमाथि मुद्दा चलाएको कांग्रेसको आरोप अस्वीकार गरेका छन् । अख्तियारले बुधबार मात्र गच्छदारसहित १७५ जनामाथि मुद्दा दायर गरेको थियो । राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा गच्छदारलाई मुद्दा चलाइएको भन्दै कांग्रेसले बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठक नै अवरुद्ध गरेको छ । तर सरकारका …
कांग्रेसलाई सरकारको जवाफ : अदालतबाट निर्दोष प्रमाणित गरेर आउनुस् Read More »